Iingcebiso Zolungiso Lwengcali | December 2021
Uwuxhoma njani umfanekiso
Imiyalelo elula yokuxhoma iifoto, umsebenzi wobugcisa kunye nezibuko.
Isikhokelo seXabiso lokuGqibela kwiNdlu evaliweyo- Kwintoni indleko ezivavanyiweyo-kwiPorchi?
Iindleko zokwakha ivaranda ebonisiweyo inokwahluka kakhulu, kodwa sachwetheza iingcali ukufumanisa amaxabiso aphakathi kunye nayo yonke into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwangaphambili.
Isikhokelo sokuhlaziya igumbi lokuhlambela-Indlela yokuhlaziya igumbi lakho lokuhlambela
Ngaba ujonge ukuhlaziya igumbi lokuhlambela? Iingcali zihamba kuthi ngayo yonke into ofuna ukuyazi yeyakho ngaphambi nangemva kweprojekthi.
Ixabiso lokudada ngaphakathi kweNgingqi kunye neNgcebiso ngokuFakela -Kude kangakanani ukubeka echibini
Sibethe iingcali zeshishini ukufumanisa yonke into ekufuneka uyazi ngaphambi kokufaka iphuli kunye nento onokuyilindela kuyo yonke le nkqubo.
Ungayisusa njani iphephadonga ngamanyathelo ama-4 alula-isikhokelo sokususa iphepha lodonga
Funda indlela yokususa iphepha lodonga ngamanyathelo amane, kunye nencam yokufaka eyenza kube lula ukuyithatha, kwaye kutheni kufuneka wenze njalo ngaphambi kokuthengisa kwakhona ikhaya lakho.
Ungasifaka njani isitovu esivuthayo - Iindleko zoFakelo lweSitovu esivuthayo
Yilelo xesha lonyaka xa iiprojekthi zokuhlaziywa kwamakhaya zigcwele. Nokuba uzama ukufudumeza indlu yakho ngento eseleyo ebusika, okanye ukuya phambili kwiiprojekthi zobusika obuzayo, mhlawumbi ukufaka isitovu somlilo sokufudumeza ikhaya lakho ngokufanelekileyo kuluhlu lwakho lwezifiso. Ukuba kunjalo, nantsi inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lakho ekubetheleleni inkqubo.
Iinkonzo kunye neengozi zeZinto ezi-9 eziDlakadlaka eziNgcono- Yokwakha iDiski yakho
Ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali ukuya kunyango lwasemva kwexesha, zininzi izinto ezisebenzayo xa ukhetha ezona zinto zintle zekhaya lakho. Ilitye okanye ikhonkrithi? Ukuhonjiswa kweenkuni okanye ingca? Fumanisa zonke iingenelo zokuxhamla kwezona zixhobo zibalaseleyo zokuhombisa apha.
Isikhokelo esichazayo sokuFunda indlela yokupeyinta isilingi sakho
Bhukhmaka eli phepha ngaphambi kokuba ukhethe loo mqengqeleki wepeyinti.
'Ukutsiba iiVenkile zeVasgas' zityholwa ngobuqhetseba-kwiNdaba yeeNdaba zeThelevishini
Ukuba unomdla kwisemina ebanjwe ziinkwenkwezi ze 'Flipping Vegas,' ungafuna ukufunda oku kuqala.
Ungazilungisa njani iiHowles okanye iiNtanda kuDaka
Imiyalelo elula yokulungisa imingxunya okanye iintanda zodonga lodaka.
Uyisebenzisa kanjani iTape yoMpeyinti-Iingcebiso zePeyinti yeMasking
Kukho isizathu sekhasethi yomzobi si ... ebizwa ngeteyiphu yomzobi. Ngokwenene ngumhlobo osenyongweni womzobi. Apha, siqhekeza ukuba loluphi uhlobo kunye nendlela efanelekileyo yokulusebenzisa. Awusoze ubuyele kumzobo osimahla.
Ungayilungisa njani iSink eViweyo kunye neBhobho evuzayo
Imiyalelo elula yokulungisa isinki evaliweyo kunye nompompo ovuzayo
Bath vs. Shower-Pros and Cons of Ukufaka ibhafu kunye nokuhlamba
Ngaphambi kokuba uhlaziye indlu yakho yokuhlambela, cinga ngendlela ibhafu yokuhlambela vs ishawa eya kubuchaphazela ngayo ubuchule bekhaya lakho kubathengi bangomso. Ingcali yezindlu nomhlaba inobunzima.
Iindidi eziphezulu zoPhahla lwezinto-Into ekufuneka uyazi ngaphambi kokufaka uPhahla lwakho
Nantsi indlela yokukhetha izinto ezifanelekileyo zokuphahla ekhaya lakho, ukusuka kumthi womsedare, ukuya kwisinyithi, kunye nodongwe.
Uyifaka njani i-Shiplap-Inyathelo ngenyathelo leMiyalelo yokufaka iShiplap
I-Chip Wade ye-HGTV isinika inyathelo ngenyathelo ngemiyalelo ngendlela yokufaka ngokuchanekileyo i-shiplap yakho.
Uyifakela njani iNkunkuma-iTutorial yokuChithwa kweNkunkuma
Sithethile nengcali yeprojekthi kaLowe uHunter Macfarlane malunga namanyathelo ekufuneka uwathathile ukufaka eyakho inkunkuma.
Uyifaka njani intambo yekhethini
Imiyalelo elula yokufaka intonga yekhethini
Iindidi zoMgangatho woMthi-yeyiphi i-Hardwood Flooring ekulungeleyo?
Kukho isizathu esivakalayo sokuthanda imigangatho yomthi: Ziyi-classic esebenza phantse ngazo zonke iindlela zangaphakathi. Kukwakhona, njengoko usenokuba uqaphele ukuba ukhe wajonga ekufakeni, ngakumbi kubo kunokuba usazi. Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, ukwahlukana kwethu kweentlobo kunye nezitayile zemigangatho yomthi.
Kwenziwe ntoni ngaphambi koLungiso -Uluqala njani uhlengahlengiso
Ikhontraktha yenkqubo kunye nomyili wekhitshi ulinganisa into ongafanele uyenze ngaphambi kokuqala inkqubo yokulungisa kwakhona
I-Ranch Remodel yasekhaya-uAnnie Selke Ranch House Makeover
IPine Cone Hill ka-Annie Selke uvuselela indlu yeefama ka-1960 kwaye i-facade inyusa ubuso. Uqala ngotshintsho olulula, njengengubo entsha yepeyinti ngaphandle, kwaye ngoku uya kwezifestile zincinci zingaqhelekanga.
usike eyakho ifama yomthi
ivaliwe ngaphambili izimvo zevaranda
ibha encinci yegumbi lokuhlala
ukuhombisa ikhaya lakho
zithetha ntoni iindawo zokulala